भारतमा अलपत्र परेका भन्छन् : आधा पेट खाएर बाँचेका छौं
विराटनगर, १२ जेठ । ‘एउटा कोठामा १२ जना छौंँ, दैनिक एक छाक खाना खाएर भोको पेटमा बन्द कोठाभित्र बस्नुपर्ने बमध्यता छ । आँसु चुहाउँदै बसेका छौं । हाम्रा कुरा सुनिदिने को छ र ?’ यो भनाई जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका–१२ का बिर्खबहादुर खत्रीको ।
उनी अहिले जनपद उत्तरखण्ड धराली भारतमा छन् । आफूहरूको गुहार सुनिदिने कोही नभएको भन्दै खत्रीले टेलिफोनमार्फत बताए । ‘४७ जना गाउँले तीनवटा कोठामा बन्दी जस्तै जीवन बिताइरहेका छौं,’ अर्का देवबहादुर बस्नेतले रुँदै भने, ‘बाहिर आए भारतीय प्रहरीले लाठीले हिर्काउँछ, कोठामा खाने खाद्यान्न सकिएको छ । ’
बस्नेतले फेरी थप्दै भने, ‘४१ दिनसम्म कमाएको पैसा सबै खाएर सकियो । राहत कसैले दिँदैन कसरी बाँच्ने हामीलाई उसद्धार गर्नुप¥यो ।’ पीडा र बेदनाका बीचमा कामविहीन भएका ४७ जना छेडागाड नगरपालिकाका नागरिक रुँदै कराउँदै उछारका लागि याचना गरीरहेका छन् ।
सिंर्गे कामी भन्दै थिए, ‘दैनिक घर परिवारले फोनमा कुरा गर्दा कस्तो छ ? के छ ? भनी सोध्दा, सधैं ढाटेर कामीलाई राम्रो छौं । चिन्ता नलिनु, भन्दै आश्वस्त पार्ने काम गरिरहेका छौं ।’
‘घरमा ऋण थियो । तीर्नका लागि सुत्केरी श्रीमती छाडेर कालापार आइयो । यहाँ पनि मरिन्छ कि, बाँचिन्छ थाँहा छैन ।’ कामीले भने ।
‘गरिबलाई जहाँ आए पनि पीडा र दुःख मात्र हुँदोरहेछ । बतै कोरोना लागेर हामी पनि कुकुर मरेझैं हुन्छौं कि भन्ने चिन्ता लाग्छ ।’ फेरि कामीले थप्दै बोले ।
तुलवीर चदराले फोनमा रुँदै भने, ‘अभाव र बाध्यताको बीचमा हुर्किएको कर्म जहाँ गए पनि ठक्करमात्र खान्छ कुनै बेला मरिहालौं कि जस्तो पनि लाग्छ तर घरमा सानी छोरीलाई आँखा अगाडी झलझल सम्झिन्छु अनि बाँच्न मन लाग्छ ।’
हामीलाई सरकारले छिटो उद्धार गर्नुप¥यो । हाम्रो एउटै सपना अब घर पुगेर आफ्नै भूमिमा इलम गरेर खाने हो । छेवैका अर्का व्यक्ति मानबहादुर लाहुरले भने, ‘दैनिक परिवारसँग ढाँटेर कति दिन अर्काको भूमिमा बस्ने ? नेपालमा परिवार चिन्तामा छन् । यता हामी पनि चिन्तामा छौं । ’
सरकारसम्म हाम्रा कुरा सुरनाएर उद्धार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नसमेत उनीहरूको आग्रह छ । हिँडेर पनि आउन सक्ने अवस्था नहुँदा त्यहाँ बस्न बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन् ।
पहिलेको जस्तो राम्रो व्यवहार अहिले भारतीयहरूको नभएको पनि उनीहरूको भनाइ छ । खाना नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था अआउन थालेको पीडासमेत उनीहरूले सुनाए ।
जाजरकोटको मात्र हरेक वर्ष सयौं मानिसहरू कमाइका लागि भारतका विभिन्न ठाउँमा आउने गर्छन् । उनीहरूले गाउँमा स्वरोजगारीको सम्भावना नभएपछि अर्कैलाई भाडा तिर्न लगाएर भारत पुगेको सयौं सर्वसाधारण लकडाउनका कारण कमाएको जति खाँदा भाडासमेत नपाएर अलपत्र परेको बताएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तका अनुसार स्वरोजगारीका लागि ४०० भन्दा बढी जाजरकोटवासी भारतलगायत मुलुकमा पुगेको तथ्यांक रहेको छ ।
संघीय सरकारका वा तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई अलपत्र परेका नागरीकलाई उद्धार तथा समन्वय गर्ने जिम्मा दिईएको छ । अहिले जिल्लामा आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर कोरोना जाँचको तयारी भईरहेको छ । रासस